ဘဝမှာနွေးထွေးမှုအပေးဆုံး လုံခြုံမှုအရှိဆုံးရင်ခွင်ရှိတဲ့ဖေနဲ့မေရဲ့ခေါ်သံအတိုင်း ဒီ blog လေးကိုခေါင်းစဉ်တပ်ထားပါတယ်
လက်ညိုးထိုးလို့သတ်ဖြတ် အဖြစ်ဆိုး ဆိုးပြီးအသက်ထွက်နေတဲ့
သတ္တဝါတွေရဲ့ အသွေးအသားမှ အားဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့
မစားဘဲနဲ့နေ သေရတာကမြတ်လိမ့်မယ် ။
ဆားနဲ့ပဲစားရတာ မြတ်လိမ့်မယ် ။
အရှုံးကိုပဲပိုက်ခဲ့တာကမှ မြတ်လိမ့်မယ် ။
မွေးတဲ့မြေ သောက်တဲ့ရေ နေတဲ့မြေကြီး
ထိုအခြေအနေက ပိုမြတ်လိမ့်မယ် ။
ဘာသာ သာသနာ ရတနာသုံးပါး
တစ်သတ်လုံးငို မျက်ရည်စိုနေတာကမှ မြတ်လိမ့်မယ် ။
မင်းအတွက်စိတ်ရှင်း သောကကင်းလိမ့်မယ် ။
ယုံကြည်မှုကို မစွန့်ပယ်ပါနဲ့ ။
ရင်းနေနိုင်တဲ့ အသိခေါက်ခက် အဝင်နက်
အိမ်မက်နဲ့တောင် အစမပျိုးမိစေနဲ့ ။
ကိုယ်ချင်းစာစိတ် အပြည့် အသိပ်နဲ့
အမြဲပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ ။ ။
သားသားအပေါ်ထားတဲ့ ကျွန်မရင်ထဲက ဖြစ်စေချင်တဲ့ ဆန္ဒလေးတွေပါ။ သူ့မွေးနေ့ ဖေဖော်ဝါရီ တစ်ဆယ့်လေးရက်နေ့ က ရေးထားတာပါ။ လေးနှစ်ပြည့် မွေးနေ့လက်ဆောင် အနေနဲ့ပေါ့။
Posted by သမီးကြီး at 9:33 AM 8 comments:
ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ (၈) နှစ်ကဒီနေ့
ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ (၈) နှစ်တုန်းက.......
ဧရာဝတီမြစ်ကမ်းဘေးက ပြည်မြို့လေးကို ငပလီကနေ ဒီနေ့အရောက် သူပြန်လာခဲ့တယ်။ ကားလက်မှတ်မရလို့ သူငယ်ချင်းတွေ တားနေတဲ့ကြားက ငါးခြောက်တင်တဲ့ကားကိုစီးပြီး သူ မရောက် ရောက်အောင်ပြန်လာခဲ့တယ်။ တစ်ညလုံးမအိပ်ရပေမယ့် သူ့မျက်နှာက မျှော်လင့်ချက်ရောင်ခြည်တွေ အပြည့်နဲ့ တက်ကြွလန်းဆန်းနေပါတယ်။ ငါးခြောက်နံ့ရယ်၊ ကြမ်းတမ်းတဲ့ငပလီလမ်းရယ်၊ သက်တောင့်သက်သာမရှိတဲ့ခုံရယ် သာရှိတဲ့အမှောင်ညကို သူဖြတ်သန်းနေချိန်မှာ သူချစ်တဲ့ကောင်မလေးက နွေးထွေးတဲ့အိပ်ရာလေးမှာ နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်မောကျနေပါစေလို့ သူဆုတောင်းရင်း လွမ်းနေပါတယ်။ သူပျော်ရမှာလား ကောင်မလေးရေ.....
ဒီနေ့မရောက်ခင်ညမှာတော့ ကောင်မလေးတယောက် အဆောင်အခန်းကျဉ်းလေးထဲက ကုတင်ပေါ်မှာ အိပ်မရဘဲ စဉ်းစားရင်း စိတ်တိုပြီး အလိုမကျ ဖြစ်နေပါတယ်။ သူ ဘာလို့ဖုန်းမဆက်တာလဲ...? ပြန်မလာဖြစ်ဘူး ဆိုရင်တောင် ဖုန်းတော့ ဆက်ရမှာပေါ့။ ဒီနေ့နေ့စွဲကိုတော့ သူ မမေ့လောက်ပါဘူး။ သူ့စိတ်ထဲမှာ ငါဟာ အလေးအနက်မရှိဘူးလား...? စတဲ့လားပေါင်းများစွာနဲ့ သူမ အိပ်ပျက်လို့ ညဉ့်နက် နေပါတယ်။ ဖြေသူမရှိတဲ့ မေးခွန်းတွေကို တစ်ယောက်ထဲမေးရင်း သူမ မိုးလင်းခါနီးမှ အိပ်ရခဲ့ပါတယ်။
ရင်းနှီးနေတဲ့ ဆိုင်ကယ်ဟွန်းသံတတီတီက အိပ်မက်ထဲအထိ သူမကို လိုက်နှောင့်ယှက်နေပါလား။ အိပ်တစ်ဝက်နိုးတစ်ဝက်နဲ့ သူမ အိပ်မက်မက်ပြန်ပြီပေါ့.... ဟွန်းသံနဲ့အတူ သူ့ခေါ်သံပါ ထပ်ကြားရတဲ့အခါ အိပ်မက်မဟုတ်ဘူးလို့ ထင်လာတယ်။ မျှော်လင့်ချက်နဲ့သူမ နားစွင့်မိတယ်။ သူ ပြန်ရောက်နေတာလား..?။ နိုးနေပြီ ဖြစ်တဲ့သူမ ဟွန်းသံကို နောက်တခေါက် ကြားချိန်မှာတော့ ပြတင်းတခါးကို ဟကြည့်လိုက်မိတယ်။ ဆိုင်ကယ်တစ်စီးရဲ့ဘေးမှာ သူမတွေ့ချင်နေတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို မြင်လိုက်ရတယ်။
မြူတွေဆိုင်းနေတဲ့ ဒီနေ့မှာ ကောင်လေးနဲ့ ကောင်မလေးတို့ ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့ ဧရာဝတီရင်ခွင်ထက်က နဝဒေးတံတားကို ဖြတ်ကျော်ပြီး ရွှေဘုံသာမုနိဘုရားရဲ့ လှေခါးရင်းတွေဆီကို ဦးတည်သွားခဲ့ကြတယ်။ ကောင်မလေးရဲ့ အဖြေမရှိတဲ့ မေးခွန်းတွေဟာ ကောင်လေးရဲ့ ပင်ပန်းမှုတွေနဲ့ အတူလေထဲမှာ လွင့်ပါသွားကြတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ကျန်နေတာက ကြည်နူးရင်ခုန်နေတဲ့ နှလုံးသားတစ်စုံပေါ့။
ဒီလိုနဲ့ရွှေဘုံသာမုနိဘုရားရဲ့ လှေခါးရင်းတွေပေါ်မှာ မြူတွေကြားက မြင်ရတဲ့ဧရာဝတီမြစ်ကြီးနဲ့ နဝဒေးတံတားကြီးကို သက်သေထားလို့ နှလုံးသားတစ်စုံဟာ နားလည်မှုရပြီးချစ်ခြင်းတွေကိုဖလှယ်ခဲ့ကြတယ်။ တန်ခိုးကြီးတဲ့ ရွှေဘုံသာမုနိဘုရားကို အတူဖူးရင်း နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွက် မျှော်လင့်ချက်တွေကို ဆုအဖြစ်ပန်ခဲ့ကြတယ်။ ဧရာဝတီမြစ်ကမ်းနဖူးက သစ်ပင်လေးအောက်မှာ သောင်ထွန်းနေတဲ့ ဧရာဝတီမြစ်ကြီးရယ် ဟိုဘက်ကမ်းကလှပတဲ့ပြည်မြို့လေးရယ်ကို ကြည့်ရင်း အပြုံးတွေဖလှယ်လို့ စကားတွေဖောင်ဖွဲ့ ခဲ့ကြတယ်။ ရင်အခုန်မြန်နေတဲ့ နှလုံးသားတွေကိုထိန်းရင်း၊ ရှက်ရွံ့နေတဲ့ မျက်ဝန်းတစ်စုံဟာ ပျော်ရွှင်နေတဲ့ မျက်ဝန်းတစ်စုံကို ရှောင်ရှားရင်း နဲ့ပဲ ရင်းနှီးနားလည်မှုတွေ နှလုံးသားတွေထဲကို စိမ့်ဝင်စီးဆင်းလာတာ သိခဲ့ရတယ်။
အဲဒီနေ့ကစလို့ သူတို့နှစ်ယောက် မျှော်လင့်ချက်အိမ်ကလေးကို တည်ဆောက်ရင်း အဲဒီအရောက် ယုံကြည်မှုတွေနဲ့အတူလမ်း ဖောက်ခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီနေ့ဟာ(၈)နှစ်ဆိုတဲ့ကာလကို ဖြတ်ကျော်ပြီး ဒီနေ့တစ်ခေါက် ရောက်လာခဲ့ပြန်ပါပြီ။ အမိမြေမှာရှိမနေတဲ့ကောင်လေးနဲ့ ကောင်မလေးက အမိမြေကို တမ်းတရင်း ပြန်လွမ်းနေဆဲပါ ဧရာဝတီမြစ်ကြီးရေ။ ဆုတောင်းတွေပြည့်ခဲ့တဲ့ ရွှေဘုံသာမုနိဘုရားကြီးကို နောက်ထပ်ဖူးခွင့်လည်း မျှော်လင့်နေဆဲပါ။
Posted by သမီးကြီး at 7:03 AM 12 comments:
"မိအေးနှစ်ခါနာဖြစ်မယ်။ မိအေးနှစ်ခါနာဖြစ်မယ်။" ဆိုပြီးလူကြီးတွေ ဆုံးမတဲ့ စကားပုံလေးရဲ့ ဇတ်လမ်းလေးပါ။
ဒါနဲ့ပဲ ရည်းစားတစ်ယောက်ရလာပြီး မကြာခင်မှာပဲ ခိုးရာလိုက်ပြေး ကြလေသတည်းပေါ့။ အိမ်ထောင်သာကျသွားရော မိအေးဟာ ထမင်းအိုးတလုံး တည်တာကလွဲလို ဘာမှ မချက်တက် မပြုတ်တက်ဘူးလေ။ ကောက်စိုက် ပျိုးနှုတ် လယ်အလုပ်ကြတော့လည်း ကျောင်းသားဆိုပြီး ရေသာခိုလာတဲ့အတွက် ရွယ်တူတွေလို မတက်ဖူးပေါ့။ ကြာတော့ ယောက်ျားက လယ်အလုပ်လဲဝိုင်းမကူ ထမင်းဟင်းလည်း ကောင်းကောင်းမချက်တတ်တဲ့ မိအေးကိုဆူတော့တာပေါ့။
တနေ့ငါးသည်လာတော့ မိအေးလည်း ငါးစမ်းချက်ကြည့်မယ် လို့စိတ်ကူးရတယ်။ ငါးဟင်းချက်နည်းက ငါးသည်ကိုမေးမယ်ပေါ့။ ဒါနဲ့ ငါးသည်ကိုခေါ် ငါးဝယ်ပြီး ငါးဟင်းချက်နည်း မေးတာပေါ့။ ငါးသည်က ငါးကိုအကြေးခွံထိုး ရေယက်ခုက် ပြီးချက်လို့ပြောတာပေါ့။ မိအေးလည်း ငါးကို အဲဒီအတိုင်းလုပ်ပြီး သေချာချက်တာပေါ့။ စိတ်ထဲမှာလဲ ငါ့ကို နေ့တိုင်းဆူတဲ့ယောက်ျား ဒီတခါတော့ ဒင်းမဆူနိုင်တော့ဘူး ဆိုပြီးကြုံးဝါးနေတာပေါ့။
ယောက်ျားပြန်လာတဲ့အခါ မိအေးက ငါးဟင်းချက်တယ် လည်းဆိုရော ရေမိုးချိုးပြီး ထမင်းဝိုင်းကူပြင်ရင်း မိန်းမကို ချီးကျူးနေတာပေါ့။ ထမင်းစားလို့ ငါးဟင်းစားကြည့်တဲ့အခါ ငါးဟင်းက စားမရအောင်ကို ညှီပြီးခါးနေတာပေါ့။ယောက်ျားက "မိအေး နင့်ငါးက ညှီပြီးခါးလှချည်လား? ဘယ်လိုချက်တုန်း" ဆိုတော့ မိအေးက "ငါးသည်ကိုမေးပြီးချက်တာ"လို့ဖြေပြီး ချက်နည်းပြောပြသတဲ့။ အဲဒီတော့မှ ယောက်ျားက သေချာကြည့်တဲ့အခါ မိအေးက ငါးဗိုက်ကို မခွဲထားတာ တွေ့သတဲ့။ "မိအေး ငါးဆိုတာ ဗိုက်ခွဲချီးအိမ်ထုတ် ရတယ်။ ဒီလောက်တောင် နင်မသိဘူးလားဆိုပြီး" ဗိုက်ကဆာ စိတ်ကတိုနဲ့ ထရိုက်ပါလေရော။
နောက်နေ့ မိအေးလည်းဘာဟင်းချက်တာ လွယ်တုန်းဆိုပြီး ဘေးအိမ် မေးသတဲ့။ ဘေးအိမ်က ဘဲဥချက်။ ပြုပ်အခွံနွှာပြီး ချက်ရုံပဲလို့ အကြံပေးတယ်။ မိအေးလည်း ဘဲဥ ပြုပ်ပြီး အခွံနွှာတဲ့အခါ ဘဲဥလုံးလုံးလေးကိုကြည့်ရင်း ငါးဗိုက်ဖောင်းဖောင်းလေးကို သတိရပြီး ဒါလည်းဗိုက်ခွဲ ချီးအိမ်ထုတ်ရမှာပဲ ဆိုပြီး အလယ်ကအနှစ်တွေ ထုတ်ပစ်ပြီး ချက်ထားသတဲ့။ ယောက်ျားပြန်လာပြီး ထမင်းစားတဲ့အခါ ဘဲဥအနှစ်မတွေ့လို့ မေးတော့ ဥာဏ်ကြီးရှင်မိအေးက "ရှင်ပြောတဲ့အတိုင်း ဗိုက်ခွဲချီးအိမ်ထုတ်လုပ်ထားတယ်" လို့ဖြေတာပေါ့။ ယောက်ျားလည်း "ဟင်!ဒီလောက်တောင် အသုံးမကျမိန်းမ၊ ဘဲဥကိုချီးထုတ်ရသလား" ဆိုပြီးပိုရိုက်တော့တာပေါ့။
ဒါကြောင့် လူကြီးတွေက မိန်းကလေးတွေကို "အိမ်မှုကိစ္စတတ်အောင်သင်။ တော်ကြာယောက်ျားရမှ မိအေးနှစ်ခါနာဖြစ်နေမယ်။" ဆိုပြီးဆုံးမကြတာပါ။
Posted by သမီးကြီး at 10:51 AM6comments:
နယ်မြို့လေးတစ်မြို့ရဲ့ ရေနံချေးဝနေတဲ့ အိမ်မဲမဲကြီးထဲမှာ ဘဝအတွက်ရုန်းကန်နေရတဲ့မေမေနဲ့ဖေဖေရယ် သမီးသုံးယောက်ရယ် ရှိပါတယ်။ အမြဲရှပ်ပြာရှပ်ပြာနိုင်ပြီး ဖြစ်သလိုလုပ်တတ်တဲ့ သမီးကြီးဟာ တိကျသေချာတဲ့မေမေနဲ့ တွေ့တာနဲ့ အရိုက်၊ အခေါက်၊ အဆူ ခံရလေ့ရှိပါတယ်။ သူ့အချစ်ဆုံးမေမေဟာ သူ့ကိုကျန်တဲ့နှစ်ယောက်လိုမချစ်ဖူးလို့ သမီးကြီးက ငယ်ငယ်ထဲကယုံနေပါတော့တယ်။ မေမေဟာ ဖေဖေနဲ့အတူစီးပွါးလည်းရှာရသေး အိမ်တာဝန်ကလဲရှိသေးတဲ့အတွက် အငယ်ဆုံးသမီးကလေးလေးကလွဲလို့ သမီးတွေနဲ့ ရင်းရင်းနီးနီးနေချိန်မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့ သမီးကြီးလဲ ဆယ်တန်းအောင် အိမ်မှာလဲအိမ်အကူမရှိတဲ့ အခြေအနေကြောင့် ကြက်သွန်တောင်မလှီးတတ်တဲ့သမီးကြီးဟာ မေမေ့ကို မီးဖိုချောင်မှာကူရပါတော့တယ်။
မေမေကိုကူရင်း မေမေနဲ့ရင်းရင်းနီးနီးနေရမှ မေမေ့ရင်ထဲကသမီးတွေအပေါ် ထားတဲ့မျှော်လင့်ချက် ဖြစ်စေချင်တဲ့စေတနာတွေကို သမီးကြီးသိရှိ နားလည်စပြုလာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ကိုညီမလေးတွေလောက်မချစ်ဖူးလို့ ထင်နေတုန်းပါပဲ။ တနေ့ငရုပ်သီးထောင်းရင်း သမီးကြီးမျက်စိထဲကို ငရုပ်သီးဝင်သွားပါတယ်။ တအားစပ်လို့အော်နေတဲ့သမီးကိုကြည့်ပြီး တိကျသေချာတဲ့မေမေဟာ စိုးရိမ်ကြီးစွာ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ မီးဖိုချောင်ကို ပတ်ပြေးနေပါတော့တယ်။ မေမေဒီလိုဖြစ်တာကို တခါမှမမြင်ဖူးတဲ့သမီးကြီးဟာ မေမေကိုကြည့်ရင်းဝမ်းသာဝမ်းနည်းနဲ့ မျက်ရည်ကျခဲ့ရပါတယ်။
မေမေ့ မေတ္တာနဲ့စိုးရိမ်မှုကိုမြင်ရတဲ့ အချိန်မှာ သမီးကြီးဟာ သူ့မျက်စိစပ်တာကို မေ့သွားခဲ့ပါတယ်။ တကယ့်ကို စပ်တာနာတာ အောင့်တာတွေကို လုံးဝမေ့သွားပြီး မခံစားရတော့တာပါ။ "အော်ငါ့မျက်စိထဲ ငရုပ်သီးဝင်တာကိုတောင် မေမေဒီလောက်စိတ်ပူနေပါလား" ဆိုတဲအတွေးနဲ့ မေမေ့ရင်ထဲကစိုးရိမ်မှုနဲ့ မေတ္တာပမာနကို ပိုမိုသိရှိလာပါတယ်။မေမေတအားစိတ်ပူနေမှန်း သိတော့ မေမေလက်ကို ကိုင်ပြီး သမီးကြီးက "မေမေ ၊သမီးဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ စိတ်မပူပါနဲ့" ဆိုတော့ စီးပွါးလည်းရှာ အိမ်အလုပ်လည်းလုပ်ရတဲ့ မေမေက " တော်ပြီ သမီးဘာမှမလုပ်နဲ့တော့ နောက်မေမေပဲလုပ်မယ်။ အဲဒါမျက်စိကန်းတတ်တယ်။ တခုခုဖြစ်သွားရင်ဒုက္ခ" လို့စိုးရိမ်တကြီးပြောပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ သမီးကြီးသိလိုက်ရတာ မေမေ့မေတ္တာပမာဏဟာ ဘာနဲ့မှနှိုင်းယှဉ်လို့မရအောင်ကြီးတယ် ဆိုတာပါပဲ။
အဲဒီနေ့က သမီးကြီးမျက်စိဟာရေမခပ် ဆေးမထည့်ဘဲနဲ့ အောင့်တာတောင်မကျန်ဘဲ လုံးဝကောင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနေ့ကစလို့ သမီးကြီးစိတ်ထဲမှာ ဟိုသမီးကိုပိုတယ် ဒီသမီးကိုပိုတယ် လုံးဝမရှိတော့ပါဘူး။ မေမေက သမီးသုံးယောက်ထဲမှာ သမီးကြီးကို မချစ်ဆုံးပဲလို့ ပြောလာရင်တောင် သမီးကြီးမခံစားရတော့ပါဘူး။ ညီမလေးတွေကိုလည်း မနာလိုဝန်တိုမှုကင်းပြီး အရင်ကထက်ပိုချစ်တတ်လာပါတယ်။ မေမေ့မေတ္တာဟာ သမီးကြီးကိုလုံးဝပြောင်းလဲစေခဲ့တာပါ။
အိမ်နဲ့ဝေးနေတဲ့သမီးကြီးတစ်ယောက် မေ၊ဖေ နဲ့ ညီမလေးတွေကိုလွမ်းရင်း အမြဲလူကျန်းမာ စိတ်ချမ်းသာကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးနေပါတယ်။
Posted by သမီးကြီး at 9:33 AM6comments:
မင်္ဂလာပါရှင်။ ကြိုဆိုပါတယ် ။ ဒီအိမ်လေးဟာ ကလေးဆန်ပြီး သံယောဇဉ်ကြီးတဲ့ မေမေ၊ စကားများပြီး စပ်စုတတ်တဲ့ သားသားလေး၊ လက်တွေ့ကျပြီး လူကြီးဆန်တဲ့ ဖေဖေ၊ တို့ရဲ့ အိမ်လေးပါရှင် လာလည်သူမိတ်ဆွေအပေါင်းစိတ်ရွှင်လန်းလို့ကျန်းမာချမ်းသာရှိကြပါစေရှင်
မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်း ရောင်းရင်းများ ရဲ့အသံ